FreeTube, Ubuntu डेस्कटप को लागी एक यूट्यूब ग्राहक | Ubunlog
FreeTube, Ubuntu डेस्कटप को लागी एक यूट्यूब ग्राहक
अर्को लेख मा हामी FreeTube मा एक नजर राख्न जाँदैछौं। यो हो Gnu / लिनक्स, म्याक र विन्डोज को लागी एक स्ट्यान्डअलोन यूट्यूब ग्राहक उपलब्ध छ। FreeTube को अवधारणा को लागी यूट्यूब सामग्री को पेशकश गर्न को लागी, गुगल संग आफ्नो डाटा बचत बिना सहन को लागी हो।
यो ग्राहक को खेलाडी हामीलाई विज्ञापन बिना एक पूर्ण अनुभव दिनेछ। जसरी हामी एकीकृत यूट्यूब प्लेयर को उपयोग गर्न जाँदै छैनौं, गुगलले हामी हेर्ने भिडियो को "दृश्य" ट्र्याक गर्दैन। FreeTube मात्र हाम्रो आईपी विवरण पठाउँछ।
फ्री ट्यूब यूट्यूब एपीआई को उपयोग भिडियो र HookTube एपीआई को लागी कच्चा भिडियो फाइलहरु लाई समात्न र भिडियो प्लेयर मा खेल्न को लागी खोज्न को लागी। सदस्यता, इतिहास, र सुरक्षित भिडियो प्रयोगकर्ता को कम्प्यूटर मा स्थानीय रूप मा भण्डारण गर्न को लागी छन्।
1 फ्रिट्यूबको सामान्य सुविधाहरू
2 Ubuntu मा FreeTube स्थापना
2.1 DEB प्याकेजको रूपमा
2.3 AppI छवि को रूपमा
3 FreeTube मा एक द्रुत नजर
फ्रिट्यूबको सामान्य सुविधाहरू
यो एक छ नि: शुल्क, नि: शुल्क र क्रस-प्लेटफर्म सफ्टवेयर.
हामी विज्ञापन बिना भिडियो देख्न सक्छौं.
यो कार्यक्रम Google लाई कुकीज वा जाभास्क्रिप्ट को उपयोग गरेर हामीलाई ट्र्याक गर्न बाट रोक्नुहोस्.
हामीलाई दिन गइरहेको छ एक खाता को आवश्यकता बिना च्यानलहरु को सदस्यता लिन को लागी सक्षम हुने सम्भावना.
हाम्रो सदस्यता, इतिहास र भिडियोहरू स्थानीय रूपमा सुरक्षित गरिनेछ.
हामी सक्षम हुन को लागी खेलाडी मा एक बटन भेट्टाउनेछौं भिडियोहरु डाउनलोड गर्नुहोस्.
हामी हाम्रो निपटान मा कार्यक्रम इन्टरफेस मा प्रयोग गर्न को लागी हुनेछ एक प्रकाश वा गाढा विषय जस्तो हामी चाहन्छौं।
कार्यक्रम इन्टरफेस गर्न अनुवाद गर्न सकिन्छ बिभिन्न भाषाहरु, जसको बीचमा स्पेनिश छ।
हामी फरक स्थापित गर्न सक्छौं खोज गर्दा फिल्टर.
Ubuntu मा FreeTube स्थापना
DEB प्याकेजको रूपमा
FreeTube Ubuntu प्रयोगकर्ताहरु र अन्य वितरण को लागी उपलब्ध छ। हाम्रो अपरेटि system सिस्टम को लागी, हामी आवश्यकता को लागी जाँदैछौं FreeTube स्थापना गर्नुहोस् DEB प्याकेज को उपयोग गरेर कि हामी मा पाउन सक्छौं पृष्ठ रिलीज परियोजना को।
वेब ब्राउजर को उपयोग गरेर प्याकेज डाउनलोड गर्न को लागी सक्षम हुनुको साथै, यो पनि हामी wget उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ टर्मिनल (Ctrl + Alt + T) बाट निम्नानुसार:
एक पटक हाम्रो कम्प्युटर मा DEB प्याकेज फाइल को डाउनलोड समाप्त भयो, हामी सक्षम हुनेछौं स्थापना सुरू गर्नुहोस् FreeTube बाट। हामी यो एकै टर्मिनल मा आदेश लेखेर यो गर्न सक्नुहुन्छ:
स्थापना पछि, हामी सक्छौं यस कार्यक्रमको सुरुवातकर्ता फेला पार्नुहोस् हाम्रो टीममा।
पोडेमोस यसको .DEB प्याकेज संग स्थापित कार्यक्रम को स्थापना रद्द गर्नुहोस् टर्मिनल खोल्दै (Ctrl + Alt + T) र यसमा टाइप गर्दै:
हामी पनि एक प्याकेज को रूप मा यो कार्यक्रम स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ फ्लैटपाक। स्थापना संग अगाडि बढ्न को लागी, यो हाम्रो उपकरण मा सक्षम यो टेक्नोलोजी को लागी आवश्यक हुनेछ। यदि तपाइँ Ubuntu २०.०४ को उपयोग गर्नुहुन्छ र अझै पनी यी प्याकेजहरु स्थापना गर्न सक्नुहुन्न, तपाइँ जारी राख्न सक्नुहुन्छ गाईड कि एक सहकर्मी यसको बारेमा लेखे।
जब तपाइँ तपाइँको प्रणाली मा flatpak प्याकेजहरु स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ मात्र एक टर्मिनल (Ctrl Alt T) खोल्न को लागी आवश्यक छ र यसमा चलाउनुहोस् आदेश:
स्थापना पूरा भएपछि, तपाइँ आदेश संग आवेदन शुरू गर्न सक्नुहुन्छ:
पोडेमोस यस प्रोग्रामबाट फ्ल्याटप्याक प्याकेज हटाउनुहोस् टर्मिनल खोल्दै (Ctrl + Alt + T) र यसमा टाइप गरेर कमाण्ड:
हामी पनि यो कार्यक्रम को उपयोग गर्न सक्छौं बाट डाउनलोड गर्दै पृष्ठ रिलीज AppImage फाइल यस कार्यक्रम को। हामी पनि आज प्रकाशित नवीनतम संस्करण को फाइल डाउनलोड गर्न को लागी निम्न तरीका बाट wget को उपयोग गर्ने संभावना हुनेछ:
जब यो डाउनलोड समाप्त, हामी गर्न को लागी हुनेछ फाईलमा कार्यान्वयन अनुमति दिनुहोस्। हामी यो कमान्डको साथ गर्ने छौं:
त्यसो भए हामी गर्न सक्दछौं फाइल मा डबल क्लिक गरेर वा टर्मिनल मा आदेश कार्यान्वयन गरेर कार्यक्रम शुरू गर्नुहोस्:
FreeTube मा एक द्रुत नजर
जब आवेदन खुला छ, हामी मात्र गर्न को लागी हुनेछ बक्स को लागी हेर्नुहोस् «खोज / URL मा जानुहोस्। त्यसोभए हामी केवल यूट्यूब मा के हेर्न चाहन्छौं र खोज परिणाम हेर्न को लागी इन्टर कुञ्जी थिच्नुहोस् लेख्न को लागी आवश्यक पर्दछ।
हामी कार्यक्रम को स्क्रिन मा खोज परिणाम हेर्न को लागी सक्षम हुनेछौं, र परिणामहरु को भिडियोहरु को बीच मा, हामी हेर्न मा रुचि राख्छौं कि भिडियो पाउनुहोस्। जब हामी भिडियो कि हामी FreeTube आवेदन मा हेर्न चाहान्छौं, हामी मात्र माउस संग थम्बनेल मा क्लिक गर्नु पर्छ.
जब हामी खोज परिणाम मा एक भिडियो चयन, FreeTube अनुप्रयोग मा यूट्यूब भिडियो लोड र यसलाई प्रदर्शन हुनेछ।
साथै यो सम्भव छ प्लेटफर्म मा दर्ता को आवश्यकता बिना FreeTube मा हाम्रो YouTube सदस्यता छ। यदि हामी एक च्यानल को सदस्यता मा रुचि राख्छौं, पहिले हामी खोज बाकस look खोज / यूआरएल मा जानुहोस् look र त्यहाँ हामी के खोजिरहेका छौं लेख्न को लागी देख्नेछौं।
खोज परिणाम मा, हामी मात्र च्यानल मा क्लिक गर्न को लागी हुनेछ। जब हामी च्यानल पहुँच, हामी मात्र बटन click सदस्यता on मा क्लिक गर्न को लागी आवश्यक छ। एक पटक हामी यो बटन छान्नुहोस्, च्यानल FreeTube को "सदस्यता" क्षेत्र मा जोडिनेछ।
FreeTube नि: शुल्क सफ्टवेयर हो कि हामी प्रयोग गर्न, अध्ययन गर्न, बाँड्न र इच्छा मा यसलाई सुधार गर्न सक्छौं।। विशेष गरी, हामी पुन: वितरण र / वा नि: शुल्क सफ्टवेयर फाउन्डेसन द्वारा प्रकाशित GNU सामान्य सार्वजनिक लाइसेन्स को शर्तहरु अन्तर्गत परिमार्जन गर्न सक्छौं।
यो प्राप्त गर्न सकिन्छ मा यस कार्यक्रम को बारे मा अधिक जानकारी परियोजना वेबसाइट.
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » FreeTube, Ubuntu डेस्कटप को लागी एक यूट्यूब ग्राहक
प्लाज्मा ५.२३ बीटा पहिले नै सडकहरुमा, KDE प्लाज्मा ५.२४ मा नयाँ के मा ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्छ
GNOME यस हप्ता GNOME ४१ को आगमन र Kooha २.०.० जस्ता अनुप्रयोगहरुमा अपडेट को उल्लेख गर्दछ।